Hotmail သို့ ဝင်ရောက်ပါ- ရွေးချယ်စရာများ | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
ဒန်နီရယ် Terrasa | 10/01/2022 23:21 | အင်တာနက်ကို
သူ့ခေတ်၊ , Hotmail ၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရေးကြီးဆုံး အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်၊ အထူးသဖြင့် Outlook ရှိ ၎င်း၏အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Microsoft တွင် ပေါင်းစည်းလိုက်သောအခါတွင် အရာအားလုံး ပြောင်းလဲသွားသည်။ အခြားအရာများထဲတွင်၊ ဤပြောင်းလဲမှုသည် အခြားအမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများအပြင် hotmail.com ဒိုမိန်းကို အသုံးမပြုတော့ကြောင်း ဆိုလိုသည်။ Hotmail သို့ အကောင့်ဝင်ခြင်းသည် ယခု မတူညီပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အရာအားလုံး၏ ဇာတ်လမ်းအပြည့်အစုံကို သိရှိလိုသောကြောင့် Hotmail ကို Sabeer Bhatia နှင့် Jack Smith တို့က 1996 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုရပါမည်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ပထမဆုံး webmail ဝန်ဆောင်မှုများထဲမှ တစ်ခု။ Y လုံးဝအခမဲ့လည်းဖြစ်သည်။
တကယ်တော့၊ တည်ထောင်သူတွေဟာ အဲဒီနှစ်ရဲ့ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့ကို စတင်ရောင်းချတဲ့နေ့အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အိုင်ဒီယာသည် အသုံးပြုသူ၏ လွတ်လပ်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ခွင့်နှင့် ကမ္ဘာ၏ မည်သည့်ထောင့်မှ ဆက်သွယ်ပြောဆိုခွင့်ကို ကိုယ်စားပြုရန် ဖြစ်သည်။ Hotmail ဟူသော စကားလုံး၏ ရွေးချယ်မှုသည် ဝဘ်စာမျက်နှာများ ဖန်တီးရာတွင် အသုံးပြုသည့် HTML ဘာသာစကားကို ဦးစားပေးပါသည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်း၏အစတွင်၎င်းကိုဤကဲ့သို့ရေးသားခဲ့သည်- HoTMaiL။ Hotmail သည် တစ်နှစ်အတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် စာရင်းသွင်းသူ သန်း4ကျော်ရှိနေပြီဟု တီထွင်မှု၏အောင်မြင်မှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။
Outlook သို့ခုန်တက်သွားသောအခါ၊ Hotmail အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏မူရင်းဒိုမိန်းကို ထားရှိရန် ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းက အနည်းငယ် နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းမျိုး မဖြစ်ပေါ်စေပါ။ ယနေ့ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Hotmail အကောင့်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ နည်းနည်းရှုပ်နေသေးတယ်။
1 Outlook မှတဆင့် Hotmail သို့ဝင်ရောက်ပါ။
2 Outlook မပါဘဲ Hotmail သို့ဝင်ရောက်ပါ။
3 Hotmail အကောင့်အသစ်တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ပါသလား။
4 Hotmail အကောင့်ကို ဘယ်လိုဖျက်မလဲ။
Outlook မှတဆင့် Hotmail သို့ဝင်ရောက်ပါ။
ယနေ့၊ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ Hotmail အီးမေးလ်အကောင့်ကို ဝင်ရောက်ရန် အရိုးရှင်းဆုံးနှင့် တိုက်ရိုက်အကျဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကတည်းကပါ။ 2013 ခုနှစ်တွင် Hotmail မှ Outlook သို့ အကောင့်များ အကြီးအကျယ် ပြောင်းရွှေ့မှု. အချို့သောအသုံးပြုသူများ (ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သန်း 300 ခန့်) သည် ဤအပြောင်းအလဲအတွက် ဝန်လေးသော်လည်း၊ ၎င်းတို့၏ အကောင့်များ၏ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုသည် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့မှာ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေနဲ့ ပိုသန့်ရှင်းပြီး ပိုမြင်သာတဲ့ interface လည်းပါပါတယ်။
စတင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် စာမျက်နှာသို့သွားပါ။ Outlook.com ကျနော်တို့၏ option ကိုရွေးပါ "လော့ဂ်အင်".
ပြီးရင်ရေးမယ် ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာ (သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်) ကို ရွေးပါ။ "နောက်တစ်ခု".
နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဆက်ပါ။ စကားဝှက်ကို ပြီးတော့ငါတို့ရွေးလိုက်တယ် "လော့ဂ်အင်".
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Hotmail အကောင့်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၍မရကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အရာအားလုံးအတွက် အဖြေအမြဲရှိသော်လည်း အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်-
စကားဝှက်မမှန်ပါက၊ caps lock ကို activated မဟုတ်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
စကားဝှက်ကို မေ့သွားပါက၊ ဤအဆင့်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် အသစ်တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်သည်-
ကျွန်ုပ်တို့သည် "စကားဝှက်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်မည်" ဟူသော option ကိုရွေးချယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လော့ဂ်အင်ဝင်၍မရရသည့်အကြောင်းရင်းကို ရွေးချယ်ပြီး «Next» ကိုနှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စခရင်ပေါ်တွင်ပြသထားသည့် အတည်ပြုစာလုံးများကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး «Next» ကိုနှိပ်ပါ။
ပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းကို အတည်ပြုရန် အခြားဖုန်း သို့မဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာတွင် လုံခြုံရေးကုဒ်တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိပါမည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုကုဒ်ကို စခရင်ပေါ်တွင် ထည့်သွင်းပြီး စကားဝှက်အသစ်တစ်ခု ဖန်တီးပါ။
အရေးကြီးသည်- ကျွန်ုပ်တို့၏ Outlook.com အကောင့်ကို အသက်ဝင်နေစေရန်၊ အနည်းဆုံး 365 ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် ဝင်ရောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လှုပ်ရှားမှုမရှိသောရက်များ တစ်နှစ်ကြာပြီးနောက်၊ အီးမေးလ်ကို ဖျက်လိုက်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ပြန်လည်ရယူရန် မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
Outlook မပါဘဲ Hotmail သို့ဝင်ရောက်ပါ။
Hotmail.com မရှိတော့သဖြင့် အီးမေးလ်ကို ဝင်ရောက်ရန် ပုံမှန်နည်းလမ်းမှာ Outlook ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၎င်းမရှိပါက သို့မဟုတ် ဤအပလီကေးရှင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မထည့်သွင်းလိုပါက၊ ၎င်းကို live.com စာမျက်နှာမှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Hotmail သို့ဝင်ရောက်ရန် လိုက်နာရမည့်အဆင့်များမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
ပထမဦးစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် browser ကိုဝင်ရောက်ပြီး URL ကိုထည့်ပါ။ live.com ပါ.
ပေါ်လာသောစခရင်ပေါ်တွင် ငါတို့အီးမေးလ် hotmail ရေးတယ်။ အပြည့်အဝ (အသုံးပြုသူသာမက၊ ရပ်စဲခြင်းလည်း)။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ စကားဝှက်ကို ပြီးတော့ကျနော်တို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "လော့ဂ်အင်"။
Hotmail အကောင့်အသစ်တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ပါသလား။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် အဖြေက ဟုတ်ပါတယ်။ အမှန်မှာ၊ Microsoft သည် သင့်အား မတူညီသော အီးမေးလ်ဒိုမိန်းသုံးခုကို ဖန်တီးခွင့်ပြုသည်-
ဘယ်လိုအမှုကိုပြုသလဲ? စာမျက်နှာကိုရိုးရှင်းစွာထည့်ပါ။ Microsoft အီးမေးလ်အကောင့်အသစ်တစ်ခု ဖန်တီးပါ။. ထိုနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုတိယရွေးချယ်မှုဖြစ်သည့် "အီးမေးလ်လိပ်စာအသစ်ရယူပါ" ကိုနှိပ်ပြီး ညာဘက်ခြမ်းရှိ drop-down စာရင်းတွင် အဆုံးသတ် "hotmail.com" ကိုရွေးချယ်ပါ။
Hotmail အကောင့်ကို ဘယ်လိုဖျက်မလဲ။
Hotmail အကောင့်ကို အပြီးတိုင်ပိတ်နည်း
ရှင်းလင်းချက်ထဲသို့မဝင်မီ၊ ဤအဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ Hotmail အကောင့်များသည် Outlook ၏ အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကို ခံစားကြသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် အသုံးမပြုတော့ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဲ့လိုအရာအားလုံးကြားမှ မင်းဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။ သင်၏အကောင့်ကိုဖျက်ပါ အခြားအကြောင်းများကြောင့်၊ ဤသည်မှာ ဆက်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်-
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ Modes တစ်ခုခုကို အသုံးပြုပါ။
Hotmail/Outlook သည် ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ် ခြေလှမ်း လှမ်းလိုခြင်း ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းပြီး ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဤအကောင့်နှင့် ဆက်စပ်နေသော အချက်အလက် ဆုံးရှုံးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးပါမည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွေးချယ်မှုကို အတည်ပြုပါမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အင်တာနက်ကို » Hotmail သို့ အကောင့်ဝင်ပါ- ရွေးချယ်စရာအားလုံး